Azonao atao ny manala ny baiko rehetra mandra-pandefasany azy ireo. Raha voavidy ny baiko ary mila manova na manafoana baiko ianao dia tokony hifandray aminay amin'ny ora 12. Vantany vao nanomboka ny fikarakarana sy ny fandefasana entana, dia tsy azo atao intsony ny manafoana izany.
Ny fahafaham-ponao no laharam-pahamehana. Noho izany, raha mila refund ianao dia afaka mangataka ny iray na inona na inona antony.
Raha misy zavatra tsy mety amin'ny vokatra ary raha tokony hiverina, dia afaka mifandray aminay ianao hamerenako ny vola feno.
Ny fiverenana dia mifanohitra amin'ny fanantitranteranay momba ny faharetana: ny fiverenan'ny tsirairay dia misy dian-tongotra karbonika. Ka lazao anay fotsiny ny tsy mety, alefaso sary iray ary haverinay aminy manontolo ny volanao.
Avy eo, raha azo atao, dia afaka manome ny vokatrao ho an'ny mpanao asa soa eo an-toerana ianao na handoa izany.
Azonao atao ny mandefa ny fangatahana famerenam-bola ao anatin'ny 15 andro aorian'ny fandefasana ny baiko. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka aminay.
Raha tsy nahazo ny vokatra ao anatin'ny fotoana azo antoka ianao (60 andro tsy tafiditra ao anatin'izany ny fanodinana 2-5 andro) dia azonao atao ny mangataka famerenana. Raha diso ny entanao dia azonao atao ny mangataka famerenam-bola na fandefasana entana. Raha tsy tianao ny vokatra azonao dia azonao atao ny mangataka famerenam-bola fa tsy maintsy averinao ilay entana amin'ny fandanianao ary ny saram-pandefasana ilay entana dia hesorina amin'ny vola tamberina, tsy maintsy tsy ampiasaina ilay entana ary misy laharana fanaraha-maso. takiana.
Ny didinao dia tsy tonga noho ny antony ao amin'ny fifehezana anao (izany hoe manome ny adiresy fandefasana diso).
Ny mba tsy tonga noho ny toe-javatra miavaka ivelan'ny fanaraha-maso ny WoopShop.com (Izany hoe tsy nanala ny fomba amam-panao, nahemotra noho ny loza voajanahary).
Toe-javatra miavaka hafa ivelan'ny fanaraha-maso ny WoopShop.com
Raha misy antony tianao hifanakalozana ny vokatrao, angamba amin'ny habe amin'ny akanjo hafa. Tokony hifandray aminay aloha ianao dia hitarika anao amin'ireo dingana rehetra izahay. ** Aza alefa aty aminay ny fividiananao raha tsy manome alalana anao izahay hanao izany.